Umsebenzi osisinyanzelo osetyenzisiweyo wokucheba isando somatshini wokucheba ngenjini yedizili eqhutywa yinjini yedizili
Isando somatshini wokusika umatshini oxutywe nomatshini sisixhobo esidityanisiweyo kunye nomqhekezi wesando kwisando esinye,esetyenziswa kakhulu kwifama,umthi kunye neenkuni zokutya, njl njl ,umququ ,Isiqu njl .hhich kufanelekile ukwenza ukutya kwezilwanyana kunye nokufuya iinkukhu. Izixhobo eziluhlaza zesando seswekile kunokuba luhlobo lweenkozo, umbona,ingqolowa ,irayisi ,amabele njl. Umgubo wokugqibela otyumkileyo unokuba ngu-0.8 ~ 8mm.Ungafumana ubungakanani obahlukeneyo bezinto eziqhekezwe ngokutshintsha isikrini.umatshini unokuqhutywa ngenjini yedizili kunye nenqwelo yombane,i-enjini yepetrol.we ingadibanisa amandla ngokweemfuno zakho.
Kwindlela yokuphila yomlimi, imfuyo yenza eyona nto iphambili kuyo. Ukufumana ingca eyaneleyo kunye nokutya okunzima kunzima kwezi ntsuku. Ke ukuze kuncitshiswe inkcitho yemveliso yobisi yobisi abalimi baqala ukusebenzisa umatshini wokusika umququ, egawula ingca ibe ngamaqhekeza amancinci. Oku kwenza ukuba iinkomo zitye yonke indawo yengca ngale ndlela kunciphisa inkunkuma.umatshini wokusika oomatshini sisixhobo esisetyenziselwa ukusika umngxunya okanye i-hay ngamaqhezu amancinci ukuze kudityaniswe kudityaniswe kuze kuphe iinkomo.. Oku kuphucula ukugaya izilwanyana kwaye kuthintele izilwanyana ukwala nayiphi na indawo yokutya kwazo. Ke ngoko ukwandisa imveliso kunye nokunciphisa ukuzama ngokomzimba okufunekayo ekusebenzeni komatshini oomatshini abavelayo kulunge kakhulu kumafama obisi. Ngoku umatshini wokusika umququ uqhutywa ngumbane kunye nenjini yedizili.
Kwinkqubo yokuphanda ukutya unokufumana inani lezithako ezifuna indlela ethile yokwenza. Ezi zithako zokutya zibandakanya ukutya okuziinkozo okuziinkozo, Umbona ofuna ukuncitshiswa kwesayizi yamasuntswana okuya kuphucula ukusebenza kwesithako kunye nokunyusa ixabiso lesondlo. Zininzi iindlela zokufezekisa ukuncitshiswa kwesayizi,Umbhoxo weHammer bayakwazi ukuvelisa uluhlu olubanzi lweesayizi zamasuntswana esebenza ngayo nayiphi na impahla ekrwada kunye nefibre yokusebenzisa ngokutyalomali okusezantsi xa ithelekiswa nomatshini wokugaya, Ulondolozo oluncinci olufunekayo,amasuntsu aveliswe kusetyenziswa isando somatshini uya kuthi ngokubanzi ube yindawo ephakathi, Ngomphezulu obonakala upolisher.
Iimpawu zesando somatshini wokusika umngxunya
1.Umatshini osebenza ngezinto ezininzi-umatshini unokusetyenziselwa ukusika ukutya okuluhlaza kunye nokusila kwengqolowa.
2.Itekhnoloji entsha yokusika-Umsebenzi wophando kule domain wafundwa kwaye kwenziwa iindlela ezintsha zokufezekisa iinjongo ozifunayo.
3.Ezokhuseleko- Eyona nto iphambili iphambili kunokhuseleko. Kuba isetyenziswa kakhulu ngabalimi kunye nosapho bakhe ke isebenziseka ngokulula nangokhuseleko.
4.Ukondliwa kwezinto zokutya – Sondla inyama nge hopper.As isitya sokudla sinokuvuleka okukhulu & ubude obukubonelela indlela yengca & ezinye izinto zokutya njengengca eyomileyo yengqolowa, ingca, iimbotyi zesoya, Isiqu sengqolowa,yonyusa imveliso yokutya.
5.Qokelela ifodder kwivenkile ekhutshelweyo -Emva kokuba ujikeleze amabala okusika, ibangela ukusikwa kwezixhobo zokutya ezinikezelweyo njengengca eyomileyo yengqolowa kwiifom zomgubo .Okukhanya kwesuntswana kobunzima belahliweyo ngumandla osisinyithi wokusika ibhloko kwicala lokukhuphela .So, indawo yokuqokelela ukutya.
6.Ingxolo ephantsi- Ingxolo engaphantsi,Uyilo olunomdla kunye nomtsalane.
7.Ubume beCompact- Icwecwe ekubumbeni unobangela ukufaka umatshini kwindawo encinci.
8.Ukhetho lwamandla ohlukileyo-Isando somatshini osika umngxunya unokuqhuba ngenjini yedizili ,Injini yepetrol ,imoto yombane.
Ukusebenza kwevidiyo yomthwalo osisinyithi wenqanawa yokusika isampula